Soo dejisan GoldWave 6.24 – Vessoft
Soo dejisan GoldWave
GoldWave – software awood leh in ay la shaqeeyaan files audio qaabab kala duwan. GoldWave ka kooban qalab iyo plugins badan oo edit kuwan raadkaygay audio, soo celinta tayada xogta jir, la abuuro wax kasta oo dhawaaq ama signalada, nadiifinta audio, beddelid files si qaabab kala duwan audio iwm software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u qoraan dhawaaqa ka makarafoon ama qalab kale oo dibadda ah ku xiran kaarka codka kombiyuutarka. GoldWave awood u siineysaa inay ku soo rogaan saamaynta dhawaaqa on track maqal ah, qabsato inta jeer dhawaaqa iyo barbaraha heerka mugga. Sidoo kale GoldWave taageertaa furaha kulul si ay u qabtaan falalka kala duwan ee software-ka.
Ayeey faylasha audio
Records audio ka qalabka dibadda
Taageerada saamaynta dhawaaqa kala duwan
Dejinta mawjadaha audio iyo heerka mugga
Comments on GoldWave:
GoldWave Software la xiriira:
English, Українська, Français, Español... Virtual DJ 8.2.3440 iyo 7.4.7
العربية, English, Français, Español... Vegas Pro 13.0.453
Editor Audio software The inuu Abuuro wax isugu darey muusikada oo noocyo kala duwan. software waxa uu leeyahay tiro ka mid ah saamaynta istuudiyaha, qalab xirfadeed iyo arrimo diyaar.
Editor Audio Software in tags of qaabab kala duwan audio saxaa. Sidoo kale software awood u tahay in la beddelo macluumaadka ku jira faylasha asalka ah.
العربية, English, Українська, Français... Wireshark 2.2.1 Standard iyo Portable
Converters Video Tool in la faylasha video shaqeeyaan oo loogu badalo in qaabab kala duwan. Software la shaqeeyaa subtitles oo kuu ogolaanaya in aad si aad u dalbato diirada ama codecs markii diinta.
English, Українська, Français, Español... TightVNC 2.8.5
Helitaanka Remote software ee maamulka fog computer by isticmaalaya kordhin gaar ah in ay tayadoodii bandwidth ee khadaka warisgaarsiinta ee gaabis ah.